६० वर्षअघि मृ'त्यु भएकी अभिनेत्रीको फोटो २४ अर्बमा बिक्यो, के छ यसको विशेषता ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com ६० वर्षअघि मृ'त्यु भएकी अभिनेत्रीको फोटो २४ अर्बमा बिक्यो, के छ यसको विशेषता ? - खबर प्रवाह
६० वर्षअघि मृ’त्यु भएकी अभिनेत्रीको फोटो २४ अर्बमा बिक्यो, के छ यसको विशेषता ?
काठमाडौं । चर्चित दिवंगत अभिनेत्री मर्लिन मुनरोको तस्विर २४ अर्ब रूपैयाँमा बिक्री भएको छ । सन् १९६४ मा बनेको उनको यो पेन्टिङ लिलामीमा राखिएको थियो । यो लिलामी क्रिस्टिजले आयोजना गरेको हो । जहाँ एक व्यक्तिले यसलाई किने । यो अहिलेसम्म कसैले किनेको सबैभन्दा महँगो अमेरिकी कला हो।
तर, मर्लिनको तस्विर कसले किनेको हो भन्ने जानकारी भने अझै उपलब्ध छैन । गागोसियन ग्यालेरीका प्रमुख अपरेटिङ अफिसर र शीर्ष डिलर एन्ड्रयू फेब्रिकेन्टले सीएनबीसीलाई भने, “यसले गुणस्तर र अभावले बजारलाई सधैं अगाडि बढाउने देखाउँछ। यो सम्झौताले जनताको सोचलाई मनोवैज्ञानिक धक्का दिनेछ ।’
मर्लिन मुनरोको यो तस्विरलाई ‘शट सेज ब्लू मर्लिन’ भनेर चिनिन्छ। यो पेन्टिङ सन् १९६४ मा एन्डी वारहोलले बनाएका थिए । उनले विभिन्न कलर स्किमका पाँच संस्करणहरू बनाएका थिए। यो मर्लिन मुनरोको मृ’त्युको दुई वर्ष पछि बनाइएको थियो।
मर्लिनको पोर्ट्रेटले उत्कृष्ट रंग संयोजन र मनमोहक अभिव्यक्ति देखाउँछ। यो चित्रकला वारहोलको सबैभन्दा प्रसिद्ध कलाकृतिहरू मध्ये एक हो। मर्लिनको यो तस्विर उनको फिल्म ‘नियाग्रा’ को पोस्टरमा आधारित छ।
मार्लिन मुनरोको ‘शट सेज ब्लू मर्लिन’ चित्रकला स्वीस आर्ट डिलर परिवार द हम्मान्सले बेचेको हो। सन् १९८० देखि उनीसँगै थिए । यो तस्विर बेचेर प्राप्त हुने पैसा परोपकारमा जानेछ । जुरिच थोमस र डोरिस अम्मान फाउन्डेसनले यो कोष विश्वभरका बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न प्रयोग गरिने बताएको छ।
मर्लिनको तस्विर लिलामीमा बेचिएको सबैभन्दा महँगो अमेरिकी कलाकृति मात्र होइन, यो लिलामीमा खरिद गरिएको विश्वको दोस्रो महँगो कलाकृति पनि हो।
मर्लिन मुनरो हलिउड अभिनेत्री थिइन् । उनीहरुलाई लिजेण्ड श्रेणीमा राखिएको छ । उनी आफ्नो सदाबहार सौन्दर्यका लागि परिचित छिन् । उनको ग्ल्यामरको निकै चर्चा भएको छ । तर, उनको ३६ वर्षको उमेरमा ५ अगस्ट १९६२ मा मृ’त्यु भयो।
जब माधव नेपालले चुनावी सभाको अन्तिम दिन सूर्यमा भोट मागेपछि‍‍….
‘एमाले अध्यक्ष ओली न्यायाधीश होइन, अभियुक्त हो’ : महामन्त्री थापा
चर्चामा अभिनेत्री अदिती बुढाथोकी, हेरै मनमोहक तस्बिरहरु
काठमाडौँ । अभिनेत्री तथा मोडल अदिती बुढाथोकी नेपाली चलचित्रमा नायक अनमोल केसीसँग क्रि फिल्म मार्फत देखिएकी हुन् । उनी सुन्दर अभिनेत्रीको रुपमा परिचित छिन् । यस्तै उनी भारतिय म्यूजिक भिडीयोमा काम गरेकी छिन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा फोटोहरु सेयर गरि रहन्छिन् । विशेष गरि उनको तस्बिरहरुले सामाजिक सञ्जालमा राम्रो स्थान पाउने गर्दछ । उनको केही […]
काठमाडौं । गायिका समिक्षा अधिकारीले आफ्नो जीवन गतिशील भन्दै हाँसो र खुसीमात्र नई रोदनको विषय उठाएकी छिन् । मुस्कानले भरिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै उनले गम्भीरता देखाएकी छिन् । समिक्षाले लेखेकी छिन्,‘गतिशील जीवनमा हाँसो, खुसी, पीडा, रोदन सबैले उत्तिकै अर्थ राख्दारहेछन् ।’